Daawo sawirada:Madaxda mamulada puntland iyo galmudug oo shirar xasaasiya ka wada Nairobi sawiro ay la galeen beesha calmka oo muran dhaliyey - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada Daawo sawirada:Madaxda mamulada puntland iyo galmudug oo shirar xasaasiya ka wada Nairobi...
Daawo sawirada:Madaxda mamulada puntland iyo galmudug oo shirar xasaasiya ka wada Nairobi sawiro ay la galeen beesha calmka oo muran dhaliyey
Nairobi (Banaadirsom)-Waxaa wali madaxda dowlad goboleedyada kulamo kala duwan ay ka wadaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen.
Madaxweynaha Puntland ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya kula kulmay safiirka dowladda Sacuudiga u fadhiya Soomaaliya iyo ku xigeenkiisa waxayna ka wada hadleen arimo dhowr ah.
Ambassador Dr. Mohammed Khayat Safiirka Sacuudiga ee Soomaaliya ayaa xusay in kulanka uu la qaatay Madaxweynaha Puntland muhiimad gaara uu u leeyahay, isla markaana waxaa uu bogaadiyey horumarka Puntland ku tilaabsatay waxaana uu xusay in Boqortooyada Sacuudi Arabia ay sida ugu dhakhsiyaha badan ay Puntland uga samaynayso maalgashi balaaran.
Dhinacyada ka shaqaynta amniga, Iskaashiga ganacsiga, dhaqaalaha iyo maalgashiga, ayuu madaxweyne Deni sheegay in kulankaan muhiimad gaar ahaaneed uu u lahaa, isagoona Madaxweynuhu safiirka uga mahadceliyey qaabilaadda heerkeedu sarayso ee uu kala kulmay Safaaradda dalka Sacuudiga iyo is af-garadka buuxa ee laga gaaray dhammaan arrimaha muhiim ka ah ee laga wada hadlay.
Dhinaca kale madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf oo weli booqasho ku jooga Magalada Nairobi ee Xarunta dalka Kenya ayaa waxaa Maanta uu halkaasi kula kulmay safiirka dawladda Sweden u fadhiya Soomaliya.
Madaxweyne Xaaf iyo Safiirka dawladda Sweden, ambassador. Andreas von Vexkull,ayaa waxaa ay ka wada hadleen xaalada Soomaaliya sigaar ah tan degaanada Galmudug oo xilligaan dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan.
Madaxweynahu wuxuu uga mahad celiyey dawladda Sweden hawsha adag ay ka wadaan Somalia gaar ahaanna kuwa ay ka wadaan Galmudug. Wuxuuna u bandhigay baahiyaha ka jira Galmudug loona baahan yahay in dawladda jarmalka gacan ka geysato.